Madagasikara amin’ireo mpikambana 44. Ny tamin’ilay rafitra teo aloha na FFM aza moa dia tsy hita hoe iza? Ireo ihany ve izany no tena mahafehy ity resaka fihavanana ity na dia atao hoe samy midina ifotony toy inona aza ireo mpikambana rehetra? Toa tsy mahagaga raha maro ireo manakiana ity rafitra ity ary hatramina mpahaifiarahamonina aza misy milaza fa tokony ho ravana izy io. Inona moa no tsy endrika fizarazarana sy fifamaliana faty niseho tato anatin’izao fitondrana izao kanefa tsy mba hita ho mihena fa vao miha mitombo hatramin’izao? Tsy fampitomboana ny fizarazaran’ny Malagasy ve izany fananganana faritra faha 23 izany? Niezaka nametraka fomba vaovao nankalazana ny 14 oktobra tao Anahidrano ny fitondrana mijoro saingy tsy nanaiky izany ny fianakavian’ny rain’ny repoblika voalohany dia ny fianakaviana Tsiranana. Raikitra ny fitokanana ny tsangambato fahatsiarovana ny rain’ny demokrasia, Itompokolahy Profesora Zafy Albert, tetsy Ambohijatovo, tsy hita popoka ny filoham-pirenena ankehitriny sy ny praiminisitra. Tsy nety naira-nipetraka teny amin’ny toeran’ireo mpanasa sy nasaina tamin’ity lanonana ity ihany koa ny tanan-kavanan’ny Profesora Zafy fony fahavelony, Tabera Randriamanantsoa. Endrika fizarazarana hita ho mitombo daholo kanefa aiza ireo tomponandraikitra amin’ny famitranana azy ireny?